Vula ifayile ye-GML ngeQGIS kunye neMicrostation -Geofumadas
Ifayile yeGML yenye yefomathi eyanconywa kakhulu ngabaphuhlisi be-GIS kunye nabasebenzisi, kuba ngaphandle kokuba ibe yifomati exhaswe kwaye ihambelaniswe yi-OGC, isebenza kakhulu ekutshintsheni nasekutshintshisweni kwedatha kwizicelo zewebhu.
I-GML sisicelo solwimi lweXML ukulungiselela iinjongo ze-geospatial, isichazi sayo simele uLwimi lweMephu yeJografi. Ngale nto kunokwenzeka ukuthumela kwifayile yokubhaliweyo, ifayile yefayile kunye nemifanekiso usebenzisa i-GMLJP2. Ingqondo yayo isekwe kwinkcazo yesakhiwo se-node (yintoni emelwe apho) kunye nedatha ngokwayo, ukuze inkqubo ye-GIS xa ifunda ifayile ye-GML iqale itolike iprofayile yayo yeempawu kwaye ibonakalise idatha yejografi. equlethwe apho.
Umzekelo wesithombe esedlulileyo ulingana nokuthengiswa kokugcinwa kweefowuni, apho ipropati ibonakala kwimeko yayo yokuqala, kwaye iyafana neyodwa into ephindwe idibeneyo, kunye nolwazi lomninimzi lomnatha.
Indlela yokufunda ifayile yeGML usebenzisa i-QGIS.
Oku kuyinto elula njengoko isofthiwe ekhululekile inokuyenza:
Ubeko> yongeza umaleko> yongeza umaleko wevektha> jonga
Nantsi inketho ye-GML ikhethiweyo, kwaye yile nto.
Ukugcina uluhlu kwiQGIS njengefayile ye-GLM, nqakraza ngokuchanekileyo kwinqanaba, gcina kwaye ukhethe ukhetho lwe-GML.
Nantsi kuyimfuneko ukuchaza ezinye iinkqubo, umzekelo:
Yinkqubo yokubhekisa, eyona inokuthi isele ichaze umgca.
Ukubhaliswa kwabalinganiswa, iLatini 1 ilungele ukungabi neengxaki ngeentetho kunye neleta ñ kumongo wethu waseSpeyin.
Ifom ebaluleke, ukusebenzisa iGML 3 kuya kuba namandla ngakumbi xa sifuna ukuba ifundwe ezinye iinkqubo okanye zisasazwe ngeGeoserver.
Kwakhona, kufuneka kusekwe ukuba sifuna ukuba isikimu sifakwe kwifayile enye okanye ngokwahlukeneyo. Kwimeko yokuyifunda kunye neMephu yeBentley, kufuneka ukuba oku kwahlulwe, njengoko kuchaziwe kamva.
Indlela yokufunda ifayile yeGML nge-Microstation V8i
Lo msebenzi ungenziwa kuphela nge-Microstation izicelo ze-GIS, njengeBentley Map, PowerView, iBentley Cadastre, okanye efanayo.
Kwimeko yam, ukuba ndiyisebenzisa i-Bentley Imephu, kwenziwa kanje:
Ifayile> Ngenisa> Iindidi zeDatha ye-GIS…
Njengoko uyakubona, apha unakho ukubiza iindawo zendawo ezenziwe njenge-Web Feature Service WFS, i-Oracle Spatial, i-SQL Server.
Iifayile zohlobo lwe-SHP azihlali zithengiswa ngaphandle, kuba zivula ifomu lomthonyama.
Kwimeko yeefayile zeGML, ukhetho lwefayile ye-GML olongezelelweyo lukhethiweyo ...
Kwiphaneli ebonakalayo, kuyakufuneka ukhethe ukuba ifayile yesikimu yahlukile. Ifayile ye-Bentley schema yaziwa ngokuba yi-XSD.
Kwaye xa oko kwenziwa, nqakraza ngakwesokudla kwindlela ye-Import1 kwakhona, kwaye ukhethe Ukuhlola kuqala ukuyibonisa okanye Ukungenisa ukuyizisa kwimephu.
Xa udibanisa into kunye ne "Hlaziya" iqhosha, eliphawulwe njengebini leziglasi, kwaye uyichukumisa into, idatha yedatha iyaphakanyiswa kokubili njengetafile kunye nekhowudi ye-xml, njengoko kuboniswe kumfanekiso olandelayo.
Ukuthumela ngaphandle kwi-GML, inkqubo elandelayo ilandelwayo:
Ifayile> Ukuthumela ngaphandle> Uhlobo lweDatha yeGIS…
Kuzo zombini iifom, kunye ne-QGIS kunye ne-Bentley Imephu, kunokwenzeka ukuba uguqule kalula i-GML njengayo nayiphi na ifayile ye-vector, kunye nedatha yayo ye-alphanumeric.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Spanish GIM International, waqhubeka ngempumelelo
Post Next CHIP i $ 9 MicrocomputerOkulandelayo »
2 Iimpendulo "Vula ifayile yeGML ngeQGIS kunye neMicrostation"
UFrancisco J Corral Nieto uthi:
Ndicebisa isicelo sewebhu se-IGN Iberpix4, eyona nto ingcono ukuvula, ukuguqula, ukugcina (gml, shp, kmz).
Iinguqulelo, iimpapasho, njl.
Le nkqubo ilula ukuyibona, kwaye ikhululekile: